Ele-PSL liqinisekise ukusayina umdlali weChiefs | News24
Ele-PSL liqinisekise ukusayina umdlali weChiefs
Cape Town - IPlatinum Stars isikuqinisekisile ukuthi isisayine umdlali weKaizer Chiefs ogijima esiswini, u-Enocent Mkhabela, ngesivumelwano sokubolekisa nesizoze siphele ngokuphela kwesizini ka-2016/17.
UMkhabela wajoyina amaGlamour Boys ekuqaleni kwale sizini evela kuSuperSport United kodwa wangakwazi ukungena eqenjini lokuqala kwezikamqeqeshi uSteve Komphela futhi akakaze adlale nomdlalo owodwa.
OLUNYE UDABA: ICeltic isishintshe umqondo ngomdlali weChiefs
Kodwa-ke lo mdlali oneminyaka engu-27 ubudala usethole ithuba lokuvuselela ikusasa lakhe ngokuhamba eNaturena, kanti manje uzobe ebheke ukuzithola kabusha kuDinaledi ngaphansi komqeqeshi uCavin Johnson.
Ngaphambili lo mdlali useke wadlalela le kilabhu kanti kubukeka sengathi uzozizwa esekhaya eRustenburg.
IMenenja Jikelele yeStars, uSenzo Mazingiza, uphawule kuTwitter account wathi: “Ukusayinwa kukaMkhabela kuletha ukubhalansa okukhulu njengoba eseke wasebenza nomqeqeshi wethu, uCavin Johnson, ngaphambilini”.